Eyona View Central Old Town Bright Studio
Esi situdiyo sisembindini sahlaziywa ngokupheleleyo ngentwasahlobo ka-2020. Inombono omangalisayo phezu kwe-Universitate Square kunye ne-Intercontinental Hotel, ibalcony encinci epholileyo kunye nekhitshi elincinci kodwa elixhotyiswe ngokupheleleyo. Isikhululo semetro saseYunivesithi siphambi kwesakhiwo kwaye iDolophu endala ikumgama ohamba ngomzuzu o-1.
Kumgangatho ophantsi uya kufumana ivenkile yaseKorea, iiresityu kunye neeterayisi ngaphesheya kwesitalato. Umzuzu omnye kude, kwi-boulevard ephambili ungafumana i-ATM kunye ne-24/7 yentengiso evulekileyo.
Isitudiyo esiqaqambileyo esilungele iindwendwe ezi-2, enendawo yokulala ezolileyo nepholileyo evula indawo entle, esondeleleneyo yokupheka kunye nendawo yokutyela. Uya kuba nakho ukufikelela kwi-balcony ye-bohemian apho unokonwabela ikofu entle kusasa. Le ndlu inegumbi lokuhlambela elindilisekileyo elinendawo yokuhamba ngeenyawo kwishawari.
Ukusuka kwi-terrace ungajonga i-vibe yesixeko, ngombono ongakholelekiyo, usele ikofu yakho yasekuseni okanye ukonwabele iwayini elungileyo ngokuhlwa.
Esi sithuba senziwe ngomnqweno wokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zeendwendwe. Sityale uthando oluninzi kunye nomdlandla kwaye sisebenze nomyili wangaphakathi oqeqeshiweyo ukuze nawe ulithande 'ikhaya lakho elikude nekhaya'!
4.91 · Izimvo eziyi-79
Le ndlu ibekwe kumhlaba onguziro weBucharest. Iziko eliDala elineendawo zokutyela kunye nemivalo ngumzuzu o-1 umgama wokuhamba. I-boulevard ilungile ngokuthatha i-stroll ecaleni kweethiyetha kunye neegalari zobugcisa. Igalari yobugcisa esanda kuvulwa ikumgangatho osezantsi wesakhiwo.
ITheatre yeSizwe esandul’ ukubuyiselwa ikude kakhulu, kwakunye neYunivesithi yaseBucharest, iicawa ezindala, iRoyal Palace yangaphambili (ngoku eyiMyuziyam yeSizwe yoBugcisa). Kukho iindawo zokuthenga kunye neevenkile zezikhumbuzo ukuba ulandela eyona boulevard ukuya ngase-Unirii Square.
Iipaki ezimbini endizithandayo - iCismigiu kunye ne-Icoanei - zikwindawo ekufutshane, kunye neCalea Victoriei, indawo endiyithandayo yabahlali kunye neendwendwe ngokufanayo.
Ndiza kufumaneka ngo-09:00 ukuya ku-22:00 ngefowuni nangeapp ka-Airbnb.